हामी निरन्तर संघर्षमा छौं – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
हामी निरन्तर संघर्षमा छौं
प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख १२
- कमरेड चट्टान
काठमाडौं । धनकुटा जिल्लाका जिल्ला इञ्चार्ज कमरेड चट्टानले आफूहरु निरन्तर वर्ग संघर्षमा रहेको बताएका छन् । नेकपा (विप्लव) बाट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) मा प्रवेश गरेपछि आफ्नो प्रतिबद्धता राख्ने क्रममा उनले यी कुराहरु बताएका हुन् । धनकुटा इन्चार्ज चट्टानसहित दर्जनौं नेता कार्यकर्ताहरु २२ अप्रिल अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीस्थापना दिवसका असरमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)मा प्रवेश गर्दा यी कुराअभिव्यक्त गरिएका हुन् ।
अन्तरहृदयदेखि नै क्रान्ति वा आमूल परिवर्तन पो गर्नु पर्छ भन्ने लागेको अभिव्यक्ति दिने चट्टान आफैमा पनि भीषण वर्गसंघर्षको भट्टीबाट खारिएर आएकाका हुन् । उनीसँग प्रवेश गरेका कोशी व्यूरो सदस्य संघर्ष (पाँचथर), कमला लिम्बू (पाँचथर इन्चार्ज), छिरिङ (संखुवासभा सेक्रेटरी), नवराज (व्यूरो सदस्य, धनकुटा), लेखनाथ (व्यूरो सदस्य, धनकुटा), अतित (काठमाडौं जिल्ला सदस्य), एडी (काठमाडौं जिल्ला सदस्य), पूर्ण (काठमाडौं) जिल्ला सदस्य लगायत २१ जना रहेका छन् । पार्टी प्रवेश गर्नेहरुलाई क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ तथा क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले अबीर र खादा लगाएर स्वागत गरिरहँदा प्रवेश गर्ने साथीहरु मात्र होइन, हलमा कार्यक्रम मनाउन सहभागी भएका साथीहरु पनि भावुक थिए ।
चट्टानले २०५२ सालदेखि आफूहरु विभिन्न नाम र व्यानरमुनि देश र जनताका लागि संघर्षरत रहँदै आएको बताएका थिए । आज फेरि टुटफुटपछि ध्रुवीकरणमा आएको र आफूहरु निकै आशावादी भएको उनले बताउँदै गर्दा पार्टीका महासचिव किरणले भनेको ‘ध्रुवीकरण सुरु भएको’ सबैमा सञ्चार भइरहेको थियो । ध्रुवीकरणमा सहभागी चट्टानले आफूहरुले छोडेको पार्टीमा पनि मतहरु राखेको तर चित्तबुझ्दो छलफल नै नभएको केही वैचारिक गुनासाहरु पनि राखेका थिए ।
विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले मात्र होइन, विचार संश्लेषणको प्रक्रियाले मात्र अबका सबै सास्याहरु हल हुने आशय व्यक्त गर्दै क. चट्टानले ध्रुवीकरणका लागि विचार बहसको आवश्यकतामाथि पनि जोड दिएका थिए । उनको निचोड थियो– सेना नभएको पार्टी र जनतासँग आफ्नो भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन ।
उनका कुराहरुको संश्लेषणमा महासचिव क. किरणले अब ठूलै ध्रुवीकरणको सम्भावना रहेको र छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई एकता र ध्रुवीकरणमा ल्याउने प्रयत्न हुन र भएरहेको कुरामा प्रकाश पारेका थिए । उनका अनुसार क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारीहरु एक ठाउँमा नआई सुखै छैन ।